Transcend JetDrive Go 500S: Maareynta Sawirada iyo Fiidiyowyada kujira iPhone ama iPad Weligood Fududeeyn | Wararka IPhone
Transcend JetDrive Go 500S: maaraynta sawirada iyo fiidiyowyada kujira iPhone ama iPad waligood ma fududaan
Ruben gallardo | | Qalabka IPhone
Suurtagalnimada sii kordheysa Xusuusta gudaha ee labada iPhone iyo iPad marwalba waxay ahayd mid kamid ah halganka ugu weyn ee udhaxeeya dadka isticmaala. Qaarkood waxay ku doodeen in meesha gudaha ku jirta ay ka badneyd intii kufilan qaar kalena ay had iyo jeer seegtay suurtagalnimada adeegsiga walxaha dibedda.
Hadda, oo ay weheliso sheegashada macaamiishaas kuwaas oo u baahday walxo dibadeed oo ay ku daadinayaan xogtooda - gaar ahaan sawirrada, fiidiyowyada, dukumintiyada, PDF, iwm - qoys ballaaran oo kaydinta dibadda ah oo la jaan qaada labada iPhone iyo iPad ayaa dhashay. Iyo Transcend waa mid ka mid ah shirkadaha ugu sharad badan xalalkan. Toddobaadyadii la soo dhaafey waxaan awoodney inaan tijaabino mid ka mid ah badeecadahan. More si gaar ah qaabka Ka gudub JetDrive Go 500S oo leh awood kayd ah 64 GB. Kadibna waxaan kaaga tagi doonnaa dareenkeena.
1 Naqshad: mid ka mid ah nuuradda iyo midda ciidda
2 JetDrive Go 500S waxay ubaahantahay codsi ay ku shaqeyso, laakiin waad heli doontaa dhamaanteed
3 Sawirro ka qaad, Duub fiidiyowyada, Kaydinta iyo inbadan
5 Faa'iidooyinka iyo Qasaarooyinka Transcend JetDrive Go 500
Naqshad: mid ka mid ah nuuradda iyo midda ciidda
Markii aan helnay xirmada ay ku jirtay Transcend JetDrive Go 500S waxaan u maleynay inay xoogaa ka weyntahay cabir ahaan. Waana taas pendrive wuxuu si fiican ugu safri karaa boorso. Way yar tahay, haa, tanina waxay sahlaysaa in lagu xiro qalabka Apple iyo in uusan aad u soo bixin. Hadda, sidoo kale waa run in ama aad adigu gacanta ku hayso wakhti kasta ama ay kuu fududahay inaad ku lumiso dhaqdhaqaaq kasta oo xun oo aanad dib ka maqli doonin.
Sidaa darteed, waxa aan kugula talineyno haddii aad hesho tan Transcend JetDrive Go 500S waa taa marka aad ku dhameysatid isticmaalkiisa iPhone ama iPad, si toos ah u keydi jeebka surwaalka. Ama, sifiican wali, boorsada.
JetDrive Go 500S waxay ubaahantahay codsi ay ku shaqeyso, laakiin waad heli doontaa dhamaanteed
Sidee wanaagsan ayaad ugu arki kartaa cinwaanka, Transendend's pendrive wuxuu u baahan yahay codsigiisa si uu ugu shaqeyn karo iPhone ama iPad - Kumbuyuutarka waxaad kaliya u baahan doontaa inaad ku xirto dekedda USB-ga oo aad bilowdo inaad kala soo baxdo dhammaan fiidiyowyada, sawirrada ama dukumiintiyada. Codsiga wuxuu ku jiraa App Store laftiisa. In kasta oo, markii ugu horreysay ee aad JetDrive Go 500S ku xirto qalabka leh iOS, waxaad heli doontaa farriin kaa digaya oo ah inaad soo degsato barnaamijkan.
Markaad soo dejiso oo aad ku rakibto iPhone ama iPad, wax walba waa la rogi doonaa. Waxay u muuqan kartaa inay dhib tahay in laga maamulo dhammaan xogtaada barnaamijka saddexaad. Laakiin i aamin intaas oo dhami way fududahay oo uma baahnid wax ka baxsan. Taasi waa, laga bilaabo, marka lagu daro inaad awood u leedahay inaad maamusho goobta kaydinta ee JetDrive Go 500S sida ugu wanaagsan ee aad rabto, waxaa sidoo kale ku jira sawir-qaade muuqaal ah, dukumiinti daawade - waad akhrin kartaa oo la tashan kartaa PDF-yadaaga, tusaale ahaan - sidoo kale sida fiidiyow ahaan. Waxaan ku tijaabinay fiidiyowyo MKV ah wuxuuna u ciyaaray si dhib la'aan; iyada oo aan loo badalin taas oo ah waxa ugu muhiimsan. Transcend's JetDrive Go 500S waa la furaa oo la ciyaaraa.
Sawirro ka qaad, Duub fiidiyowyada, Kaydinta iyo inbadan
Transcend JetDrive Go 500S - wadistayadu waa 64GB, laakiin adiguba waxaad leedahay 32 iyo 128GB - waa mid dhinac walba leh oo diyaar u ah shaqada adag. Waxaan sharraxnaa nafteena: waxa ugu horreeya ee xawaaraha gudbinta ee dekedda hillaacu yahay 20 MB / s, inta la isticmaalayo Dekedda USB 3.1 waxay aadi kartaa ilaa 130MB / s, halkan waxay had iyo jeer ku xirnaan doontaa qalabkayaga iyo qaabeynta. Taasi waxay tiri, waxaan isticmaalnay MacBook Air bartamihii 2011 iyo iPhone 7 Plus. Baahintuna marwalba waxay ku socotey xawaare wanaagsan.
Taasi waxay tidhi, Rarista macluumaadka JetDrive Go 500S waa ficil aad u dhakhso badan. Iyo inaad ku raaxeysato waxaas oo dhan sidoo kale waa deg deg: gal qaybaha kala duwan oo dooro waxaan dooneyno inaan sameyno. Barnaamijka Transcend wuxuu u kala qaadaa saddex qaybood: JetDrive Go, Kaabta iyo Qaado Sawir / Video.
Midka koowaad, waxaan ka heli doonnaa wixii aan ku keydinnay gudaha pendrive, iyadoon loo eegin astaantiisa: sawirka, fiidiyowga, dukumintiga, iwm. Xulashada labaad waxaan ku heli doonnaa nuqullada nuqullada aan sameynay. Qeybtaan waxaan kala dooran karnaa inta u dhaxeysa sameynta nuqul sawiradeena, fiidiyowyadeena ama xiriiradayada. Waxa kale oo ay na siisaa suurtagalnimada samaynta nuqul ka mid ah sawirrada aan ku kaydsannay iCloud, iyo sidoo kale kala-doorashada inta u dhexeysa dhowr meelood oo daruur ah. Oo halkan waxaan la yaabnay tan JetDrive Go 500 sidoo kale wuxuu la shaqeeyaa Instagram.
Ugu dambeyntiina, ikhtiyaarka aad ku qaadan karto fiidiyowyo ama sawirro sidoo kale waa hab lagu ilaaliyo waqtiga. Waxaa intaa sii dheer, waa mid ka mid ah sababaha keydinta bannaanka looga keenay Transcend ay u yar tahay tan: Haddii aad sawirro ka qaadatid ama aad ka duubeysid fiidiyow barnaamijka JetDrive Go 500, si toos ah ayaa loogu keydin doonaa gudaha xusuusta USB-ga.
Runtu waxay tahay in Transcend JetDrive Go 500S uu noqon karo Saaxiibka ugu fiican ee dhammaan kuwa adeegsada iPhone ama iPad ahaan xarun hawlgal waana inay qaadaan faylal fara badan. Waxay si buuxda diiradda u saari kartaa isticmaaleyaasha u baahan qaddar aad u tiro badan oo buugag ah ama dukumiintiyo PDF ah, iyo sidoo kale dhammaan kuwa inta badan safarka badan oo doonaya inay had iyo jeer haystaan ​​maktabad wanaagsan oo filimo ah ama taxane ah oo gacanta ugu jira si ay wax ugu sawiraan xilligan.
Sidoo kale, cabirka Transcend JetDrive Go 500S waxay noogu muuqataa wax yar, laakiin waa in sidoo kale la aqoonsadaa in markaan u adeegsano ku xirnaanta qalabka iOS ay tahay guul.
Ugu dambeyntiina, waan jeclaannay in arjiga - halkan laga helo kala soo bax xiriirinta- noqo mid dhammaystiran; sidaas dareen leh oo kuu ogolaanaya inaad si aad u aragto dhammaan noocyada faylasha iyada oo aan loo baahnayn in ay isticmaalaan app-saddexaad. Taasi waa, waxay kaa caawin doontaa inaadan waqti lumin: Ma dooneysaa inaad ku ciyaarto fiidiyow? Waxay noqon doontaa. Ma rabtaa inaad aqriso dokumenti PDF ah? Waxay noqon doontaa. Miyaad dooneysaa inaad ku raaxeysato sawirrada aad qaadatay intii aad ku jirtay socdaalkaaga maanta? Waxay noqon doontaa. Sida ugu fudud ee. Markay alaabtu fududahay in la maareeyo oo si fiican u shaqeyso, had iyo jeer waxay leeyihiin intaas dheer oo ka dhigaysa mid soo jiidasho leh. Intaas waxaa sii dheer, qiimaheeda ma badna. Gudaha Amazon waad awoodaa raadi 60 euro - Had iyo jeer ka hadal nooca 64GB.
Ka gudub JetDrive Go 500S
Dib u eegida: Ruben gallardo
Iibso Transcend JetDrive Go 500
Faa'iidooyinka iyo Qasaarooyinka Transcend JetDrive Go 500
Xawaaraha gudbinta wanaagsan
Si fudud loo maareeyo
Soo dejiso sawirada Instagram
Barnaamijka maareynta maaddooyinka bilaashka ah
Waxaa ku jira ilaaliyeyaasha dekedda
Kuu ogolaanayaa inaad si toos ah uga eegto barnaamijka abka: fiidiyowyada, sawirrada iyo dukumintiyada
La jaan qaada aaladaha leh iOS 9.0 iyo ka dib
Cabbir xoogaa yaraaday
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Qalabka IPhone » Transcend JetDrive Go 500S: maaraynta sawirada iyo fiidiyowyada kujira iPhone ama iPad waligood ma fududaan
Apple wuxuu ka noqday beta-kii ugu horreeyay ee watchOS 5 dhibaatooyin awgood intii lagu jiray rakibidda
Reelive WWDC 2018 oo ka hubi wararka ku jira bogga Apple